Malezia - ALinks
Lahatsoratra momba an'i Malezia
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Malezia?
Novambra 27, 2020 Antika Kumari asa, Malezia
Traikefa mampatahotra ny mitady asa any Malezia. Any Malezia, ny tsena dia mifaninana tokoa ary mety hiatrika fanamby maro, anisan'izany ireo matihanina mahomby. Raha voalaza izany dia mety ho hitanao fa mendrika ny fiezahana izany. Raha ampitahaina
Visa any Malezia ho an'ny Indiana
Oktobra 12, 2020 Antika Kumari Malezia, visa ho
Tetikasa eVisa no napetraky ny Governemanta Malezia tamin'ny taona 2017 mba hampiroboroboana ny fangatahana visa sy ny fizahantany any Malezia. Ny olom-pirenena indiana dia afaka mangataka visa visa (eVisa) sy eNTRI (Fisoratana anarana sy fampahalalana momba ny dia elektronika) raha mifanaraka izy ireo
Fepetra takiana visa any Malezia
Septambra 28, 2020 Maitri Jha Malezia, visa ho
Ny governemanta Malaysia dia nanolotra ny programa e-Visa hidiran'ny mpandeha ao Malezia. Ny mpitsangatsangana dia mameno rindranasa an-tserasera ahafahan'izy ireo mangataka visa hiditra ao Malezia. Ny visa tamin'ny alàlan'ny mailaka dia tonga tamin'ireo mpangataka taorian'ny famenoana ny
Ny vidin'ny fiainana any Malaysia
Enga anie 15, 2020 Maitri Jha Malezia, Travel
Malezia dia firenena tena tsara honina, toy ny nivelaran'ny firenena tato ho ato. Malezia dia toerana malaza sy malaza eto an-tany ny fizahan-tany amoron-tsiraka. Ny sakafo azo eto dia zavatra tsara indrindra koa.
Ny vidin'ny fivelomana na trano sy trano any Danemark
Enga anie 14, 2020 Maitri Jha Malezia, Travel
Nijery hipetraka tany Danemark, avy eo dia mila mahafantatra zava-dehibe sasany momba ny firenena. Lafo be ny vidin'ny trano any Danemark. Na ny fitsipi-piainana aza dia avo noho ny any amin'ny faritra atsimo Eoropa
Ianao ve mpivarotra entana? Fitaterana any Malaysia.
Enga anie 12, 2020 Karuna Chandna mandehana, Malezia
Fitaovana fitaterana mora vidy indrindra any Malezia. Ny fotodrafitrasa fitaterana dia iray amin'ireo anton-javatra lehibe indrindra amin'ny fandrosoan'ny firenena. Na dia manana sehatry ny fitaterana lehibe sy isan-karazany aza i India, manana ny anjarany manokana izy, dia azo resena amin'ny alàlan'ny famokarana angovo
Fiarovana Asylum any Malaysia
Enga anie 11, 2020 Maitri Jha Malezia, mpitsoa-ponenana
Toerana fialokalofana i Malezia, satria olona maro no mifindra monina any isan-taona. Te hangataka fiarovana fiarovana fialokalofana any Malezia ve ianao? Nametraka loharanom-baovao vitsivitsy ho anao izahay izay mety hanampy anao. Ny vintana amin'ny
Fitsaboana sy hopitaly eto Malaysia.
Enga anie 6, 2020 Karuna Chandna fahasalamana, Malezia, Travel
Ny olona koa dia miatrika ny olan'ny fisafidianana ny dokotera tsara indrindra any amin'ny firenena vahiny. Ary koa amin'ireo andrim-panjakana isan-karazany rehefa lany fandaniana ara-pitsaboana. Izany dia noho ny hopitaly any Malezia fantatra noho ny tombony manokana. Hopitaly any Malezia manana
Fianarana any amin'ny oniversite Malaysia
Aprily 3, 2020 Antika Kumari Malezia, fianarana
Safidio ny hianatra any amin'ny oniversite Malaysia ary ho azonao atao ny mahita ny ala mando, ny moron-dranomasina sns… Any amin'ireo tanàn-dehibe koa, betsaka ny mitazona ny fahatsapana rehetra, manomboka amin'ny tsena maro loko ka hatramin'ny moske. Bodista sy Hindoa